TCDD’den Fas Demiryollarına Teknik Ziyaret – RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAAFRIKA212 MoroccoBooqashada Farsamada Morocco Railways laga soo bilaabo TCDD
11 / 10 / 2017 212 Morocco, AFRIKA, DUNIDA, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, TURKEY, gaadhi
Booqasho farsamo ayaa la sameeyay si loo horumariyo fursadaha wada shaqeynta labada dhinac ee u dhexeeya TCDD (TCDD) iyo Tareenada Qaranka Morocco (ONCF).
TCDD (TCDD), National Morocco Tareennada (ONCF) ee qaabka guud ee Memorandum of Understanding kala saxiixdeen fursadaha iskaashiga laba-geesoodka ah Manager-xigeenka Guud oo ku hadlaya magaca TÜDEMSAŞ inay sameeyaan booqashooyin farsamo Morocco ee horumarka ah ee Jalaluddin Bayrakçıl iyo qorshaynta wax soo saarka iyo xakameeyo Head Mustafa YURTSEVEN ka qeyb galay.
Morocco Shirkadda Tareennada National Agaasimaha Guud ee ONFC Mohamed Rabie Khli iyo Agaasimaha Guud ee TCDD Ciise APAYDIN ​​TCDD in shirka lagu qabtay Madaxtooyada iyo kuwii shuraakada la TÜDEMSAŞ, in la sameeyo iskaashi TULOMSAS iyo TÜVASAŞ iyo goobaha wax soo saarka la falanqeeyey.
ONCF-da Daraasada Tareenka Xawaaraha Sare ee goobta, wafdiga, caasimadda Rabat YHT dhismaha wadiiqada dhismaha, gawaarida xamuulka iyo rakaabka iyo dayactirka ladagaallooyinka ayaa la helay.
oncf'n by load iyo wax soo saarka iyo Warshadaha Chérifienn sameeyey dayactir Casablanca iyo Trading Company oo ah baabuurta rakaabka (SCIF) ee goobta of Agaasimaha Maamulka shirkadda ee loo baahan yahay waxaa loo sameeyey in baaritaanka la socda Hassan REBOUHAT in.
Shil gaari oo ka dhacay Morocco ugu yaraan 10 dhintay, 100 Injured
Arslan: "Waxaan ku jirnaa kaalinta sideedaad ee lixda adduunka ee Yurub
Konya Şeker Agaasimaha Guud Erence: "Nolosheena waxa ay fudaydisay YHT Konya